शब्दकोश: ... साथी ! (गजल)
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, March 26, 2009
Prabesh Poudel "उजेली" March 26, 2009
बडा गजबको गजल लेख्‍नुभएछ !! औसत होइन निकै राम्रो लाग्यो मलाई त !!
Dilip Acharya March 26, 2009
गजल, मलाई पढन् र सुन्न एकदमै मन पर्ने तर लेख्‍न भने त्यत्तीकै गाह्रो लाग्ने बिधा हो ।
कहिलेकाहि लेख्‍न थाल्दा पनि १-२ शेर बनेपछि अरु तारतम्य टुट्छन र मेरो कम्प्युटरमा आधा-अधुरा गजल, शेर र मिस्राहरुको ठेली नै छन।
खै मौसमले र वातावरणले साथ नदिएर हो कि,तपाईले भने एउटै चैते झरीमा तिन तीन गजल तयार गर्नु भएछ।
तपाईको यो गजल पनि मलाई भने मन पर्‍यो ।
यी दुई हरफहरुमा भने जिवन जगतको समग्र यथार्थ घनीभूत भएर रहेको पाएँ।
दीपक जडित March 27, 2009
प्रवेशजीले भनेझैं यो औसतमा दरिने गजल होईन भन्छु म पनि , किन त्यसो भन्नुभयो यस्लाई ? त्यस बखतका बाँकी दुई अझ बलवान् हुनुपर्छ भन्ने अनुमान लगाएं मैले त । बाँकी पिँडाको तोडको जुन कुरा उल्लेख छ त्यो तोड नसहेसम्म जीवनको यौटा महत्वपूर्ण पक्ष नै अपुरो रहन्छ भन्छु म चैं । जीवन पूर्ण हुनलाई पनि यस्ता कुराहरु आफ्नो आफ्नो भागमा पर्नु आवश्यक हुन्छ तर भागमा भन्दा धेरै सहिदिनु पनि अन्याय हुन्छ है ।
Jotare Dhaiba March 27, 2009
धन्यवाद मेरो लिखुरे प्रयासमा हाड-मासु थपिदिनुभएकोमा ।
तपाईँले नयाँ मायाको कुतकुत्याउने गजल उने जस्तो त अलि सिगार्न सकिनँ है मैले प्रवेश भाइ !
दिलीप दाइले १-२ सेरमा थान्को लागेका गजल-खेस्रा पनि यसो कुनै बेला कुनै टाँसोको बहानामा पोक्याएर हामीसामु पनि बाँडे हुने नि, एकैचोटि त जिन्दगानीमा के नै कुरा पूरा हुन्छ र ? कतै हाम्रो पाठकीय सुम्सुम्याइ पो खोजेको हो कि तपाईँको गजलकारिताले ? मलाई पनि कुनै जमानामा यो गजल भन्ने हत्तेमा कहिल्यै हात नबस्ने भयो भनेर थकथकी लाग्थ्यो । तिनताका गजलको भेलबाढी उर्लिँएको मौसममा आफूले गजल लेख्‍न नसक्दा-नजान्दा अरूको दाँजोमा आफू निकै अपाङ्ग भएको मनोदशा भोग्नुपर्थ्यो । तपाईँलाई त्यस्तो दबाब नरहे पनि ब्लगमा यसो बेलाबेला चुटुक्क स्वाद फेर्नै भए पनि गजल-खेती गर्नतिर लागे वेशै होला ।
दीपकजीको ढाडस मलम लगाउने खालको छ । अनि यो औंसत गजल किन भनेको भन्ने जवाफ चाहिँ ट्वाक्कै यो नहोला, तर यसमा खासै नयाँपन दिन सकिनँ जस्तो लाग्यो । पहिलेकाहरूले लेखिसकेकै कुरालाई शैली फेरफार गरेको बनौट भए जस्तो लाग्यो । जीवनमा तोड नपरी त मान्छे बनिँदैन रहेछ भन्ने बुझ्दैछु म । तपाईँको अवस्थाअघि मेरो तोडको त यहाँनेर के कुरा गरिराखू र ? र पनि कुनै नराम्रै कुरा हुनुको पनि धेरै कारण हुने रहेछ यात्रामा, त्यसले आगामी पलको लागि धेरै कुरा सिकाउँदो रहेछ । गडबडीले मान्छेलाई परिस्थितिको सामु बलियो बनाउँदै लग्दो रहेछ । त्यसतो गडबडी नभए त साँच्चि ने जीवन अपूरो हुँदो हो ।
कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा March 27, 2009
धाईबाले मंगलम क्याफे खोल्या छन भन्ने कुरो भर्खर भर्खर मात्र था पाए पनि पसेर उनका कुरा सुनेको चाही थिइन, ग़ज़ल त गज़ब छ नै उनका सबै बखान पढ़ी रहूँ सुनी रहूँ लाग्ने रहेछन , धाईबा जी लाइ धेरै धेरै प्रगति र शुभ कामना छ उनको यो मंगलम क्याफे पसल बौद्धिक खुराकको खानी नै बनोस!
Jotare Dhaiba March 28, 2009
धन्यवाद कृष्णजी । CaFe का मेन्यूहरू मन पराइदिनुभएकोमा खुसी लाग्यो । प्रयास गर्दैछु, केही आफ्नै मनको तुलबुल मेट्दै केही सार्वजनिक सरोकारका कुरा उठाउँदै, केही आपसी कुराकन्था बाँडीचुँडी गर्दागर्दै ब्लगिङको मातमा रङमङिन पुगियो । सकेसम्म खुराकदार कुरा लिएर आउनेछु निरन्तर ।
साथसाथ रहौँ ।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) March 28, 2009
जीवन जी निकै पोसिलो पोषण रहेछ ... अनि तपाइले आफ्नो लेखाइलाइ लिखुरे प्रयास भन्नु भएको रहेछ मलाई त राम्रो लागेन नि ... यती सुन्दर सब्द समायोजन र असल भाव रहेको छ ।
अनि अर्को कुरा तपाईको पोस्टको पहिलो दुई लाइन खोई कुनि हो - अलिक खप्टिएको जस्तो देखिन्छ । अरु त सब राम्रो र फिट देखिन्छ ।
Milan March 28, 2009
गजल सुन्दर शब्द, मिलेको लय र मिठो भाबले चिटीच्याट्ट छ | मन नपर्ने कुरै भएन ...
मुख्य कुरो यो गजलको अधिकांश भाग P+ve छ ...मलाई यो गजल मन परेको प्रमुख कारण चाहीं त्यै हो...
खै कसले लेखेको हो थाहा छैन, कहिले काहीं काम कुरा बिग्रिदा म एउटा गजल सम्झन्छु...
आशा नमार साथी माटो अझै छ बाँकी
हाम्रो भबिश्य खोज्ने बाटो अझै छ बाँकी
जओस न एक मौका लाखौं अरु कयौ छन
लामो छ जिंदगीको पाटो अझै छ बाँकी
धाईबाजीका गजलका केही शेरहरुले यो गजल जस्तै ट्याब्लेटको काम गर्लान...
सिकारु March 29, 2009
ढीलै भएपनि धाइवा जी को गजलको स्वाद लिने मौका पाए । मिठो गजल अनि शब्द संगै शेरहरुको पनि उत्तिकै समायोजन ।
>Jotare Dhaiba< March 30, 2009
पछिल्लो क्रममा आउनुहुने वेदनाथजी, मिलनजी अनि सिकारुजीलाई पनि हार्दिक शुभेच्छाका निम्ति धन्यवाद !
वेदनाथजी, यस गजललाई लिखुरे प्रयास भन्नुको कारण यसको सिर्जनाको क्षणमा म आफैँ व्यथित थिएँ, यो त मैले आफैँलाई रेटेर निकालेको सारङ्गी-धुन हो । थाहा छैन, सारङ्गीको सुमधुरता यसमा मैले राख्‍न सकेँ कि सकिनँ ।
मिलनजी, नकारात्मक मोडको यात्राबाट गुज्रिँदा गुज्रिँदै जीवन त्यस्तो धारिलो र पारङ्गत हुँदै जाँदो रहेछ, सकारात्मक सोचहरू पलाउन थाल्नु एकदम जरूरी हुँदो रहेछ । यही चक्रअनुरूप यो गजल आएको हो भन्नु ठीक होला मैले । यसलाई तपाईँले सकारात्मक रूपमा सविकार्नुभएकोमा मेरो भाव ठीक ठाउँमा परेको भनुबव गर्दैछु । "बाटो अझै छ बाँकी" गजल उद्‌धृत गर्नुबएको रहेछ, यो गजल मेरो ठम्याइँ अनुसार घनेन्द्र ओझाको हो । घनेन्द्र- राधा कँडेलको वैवाहिक समारोहको अवसरमा हालै केही महिनाअघि यसै शीर्षकमा दम्पत्तिको संयुक्त गजल सङ्ग्रह पनि प्रकाशन भएको छ ।